Ulimi alufundiswe kuzuzwe kulo ubuhlakani bokhokho
Ukuvuselela kobudlelwane nelaseCuba, udaba lwabathandanayo bobulili obufanayo kanye nohambo lwase-Afrika kusho ukusongwa kohambo luka-Obama
Ngesikhathi esakhankasela ukuba nguMengameli u-Obama kuningi akuthembisa njengezinguquko ezakhamuzini zaseMelika kanye nezomhlaba jikelele. Lokhu kwamukelwa ngo‘elethu’ nokwabonakala ngezinombolo zabantu abamvotela kanjalo nokwamukeleka emazweni amaningi. Phakathi kwezinto ezaba yizethembiso kwaba wudaba oluthinta uhlelo lwezempilo eMelika, udaba lwejele elisesiqhingini iCuba, ubudlelwane phakathi kwezwe lakhe kanye namazwe omhlaba nokunye
Phezu kwedumela ayenalo ngesikhathi engenela ukhetho okokuqala, lokhu kubukeka ngungalenzelanga lutho iqembu lakhe ngoba namuhla leli qembu elinamalungu amaningi engakathathi u-Obama selehlelwe yizihlalo eNdlini YeziGele (Senate) kanye nakuSishayamthetho (Congress). Lokhu kufake enkulu ingcindenzi ngoba kusho ukuthi amaRepublican okuyiwo amaningi asenamandla okuchitha konke okwenziwa nguMengameli. Amandla amaRepublican abonakalae kakhulu ngesikhathi emema kuSishayamthetho uNdunankulu waseMelika uBenjamin Netanyahu ukuba azokhuluma kule ndlu okwakuyinto eyahunyushwa njengokubukela phansi umsebenzi ka-Obama ezingxoxweni ezingenunzi ne-Iran.
Abaningi bayamsola lo mholi odabeni lwaseSyria, eLibya, Russia nakhona e-Iran. Bamsola ngokuthi isenzo sakhe sokuthambisa isandla nokungafuni ukuthumela amagumgedlela ombutho waseMelika ukuyophebeza i-ISIS kwenza iMelika ibukeke iyiminqolo. ELibya nase-Afganstan kunabathi lo mholi uyishaya emuva ayishaye phambili ngoba uthi akawayisi amagumgedlela kepha ngakolunye uhlangothi athumele izikhali kumavukelambuso aseLibya, aseSyria kanye nasenxushunxushwini ethinta iRussia.
Okunye angazishaya ngakho isifuba wudaba lwezempilo. Engakangeni esihlalweni u-Obama ibiyinkinga indaba yezempi kuleliya lizwe. Nokho konke lokhu kubukeka kuzoguquka njengoba ngomhla zingama-23 kuNdasa 2010 umthetho owaziwa ngokuthi yiThe Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), neyaziwa ngokuthi yi-Affordable Care Act (ACA) noma yi-Obamacare. Okunye lo mholi athi uzokwenza ukukhipha impi yaseMelika ezweni lase-Iraq kanye nase-Afghanistan. Akungabazeki ukuthi lolu daba lulukhuni kakhulu ku-Obama ngoba izwe lakhe lingene shi ezimpini ezingagcini nje kuphela ngokufa kwabantu kanye nokubhujiswa kwengqalasizinda kulawo mazwe athintekayo. Enye yenkinga ngalezi zimpi wukuthi zidla kakhulu emnothweni waseMelika ngoba njengoba bethumela amagumgedlela nje ukuba ayolwa ngaphandle kudla izimali ezishisiwe nokumenza ngokwezimali ezichithwayo ngokuthumela amabutho asondela noma afane nabakwaBush. Kulolu hlangothi yize u-Obama ayikhipha impi yakhe e-Iraq ukugasela kwebutho lophumasilwe be-ISIS sekwenze iMelika yashintsha ukwenza nokukhuluma njengoba sekunobufakazi bokuthi iyazikhipha izikhali.
Odabeni lwaseCuba, u-Obama uzongena emlandweni njengomholi waseMelika owenza okwakungalindelekile njengoba esedale amaxhama okuxhumana naleliya lizwe elisesiqhingini nobekuyinkukukhu nempaka. Nokho yize isithombe esivelayo sithi lo mholi wenze isimanga iqiniso lithi bese kukhona ingcindezi. Enika incazelo ngalolu daba loyo othathwa njengencithabuchopho ehlonishwa umhlaba wonke uMnu uNoam Chomsky utshele iphephandaba laseMexico iLa Jornada ukuthi isenzo sika-Obama kasikho msulwa kepha kungenxa yengcindezi emangalisayo evela emazweni aziwa ngokuthi ngawaseLatin America. Ngokusho kukaChomsky la mazwe abalelwa ema-22 kubalwa iMexico, iBrazil, iVenezuela, iCosta Rico, iBolivia namanye abedudula impi yokuthi iCuba ingakhishwa inyumbazane. Ngokusho kukaChomsky, umhlangano wango-2012 wamazwe aseLatin America yiwo owavezela iMelika isithombe sokuthi la mazwe asesondelene kakhulu neCuba kuneMelika nokuyinto okungathi nxa iyekwa ibulale ubudlelwane bala mazwe iphinde iphazamise umnotho weMelika.
Olunye udaba olumenze wabayintandokazi kwabanye oka-Obama kube wudaba lo mthetho ovumela ukuba abobulili obubodwa baganane. Lokhu ngokusho kuka-Obama emuva kokuphuma kwesinqumo senkantolo lapho kwathiwa wonke umuntu kulo lonke izwe usenelungelo lokushada . Ngesikhathi kuphuma isinqumo u-Obama wathi: “Isizwe sethu sakhelwe emgomeni oqinile othi wonke umuntu udalwe walingana nomunye. Umsebenzi waso sonke isizukulwane ukuba siqonde okuqukethwe yila mazwi kuhambisane nobuqiniso bangaleso sikhathi ngokuguquka kwaso.” Waqhubeka wathi: “Ukuqhubeka kwalolu hambo kuyanwabuzela, kwesinye isikhathi kube nje amanyathelo amabili kuyiwa phambili, kube inyathelo elilodwa kubuyelwa emuva, konke kuyimizamo yezakhamuzi ezizimisele,” eqhubeka. “Kwesinye isikhathi, kuba nezinsuku ezinje lapho imizamo enwabukayo iklonyeliswa ngobulungiswa obufika njengonyazi lwezulu.”
nguMfo waKwaNomajalimane Jul 31, 2015